पूर्वराजासँग नेताहरुको भेटको रहस्य, डा. शशांक कोइरालाको डिनर मिटिङ ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चर्चा निकै चुलिएको छ । खासगरी हिन्दू धर्म र राजतन्त्र पुनस्थापनाको प्रयासका सन्दर्भमा । त्यसमा पनि नेकपा नेताहरुले नै यस्तो कुरा गरिरहेका छन् कि व्यवस्था नै परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ र त्यसमा चनाखो हुनुपर्छ । त्यही हल्लाको वीचमा फेरि नेकपा सम्बन्ध नेताहरुको नाम जोडिएर
पूर्वराजा र उनी निकटका व्यक्तिहरुले भेटघाट गरेको चर्चा भइहरेका छन् । त्यही सन्दर्भमा वामदेव गौतमको नाम जोडेर फेरि चर्चा चलेको छ । गौतमले पूर्वराजाका निजी सचिव पशुपतिभक्त महर्जनसंग भेटवार्ता गरेको चर्चा शहरमा व्यापक छ । त्यही भेटघाटका कारण भदौ १६ गते सोमवार गौतम र महर्जनबीच भेटवार्ता भएको चर्चा चले पनि स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।
त्योभन्दा पहिला पनि नेकपा नेता तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल निर्मल निवास छिरेको चर्चा बेस्सेरी चल्यो । यही बीचमा कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले पनि पूर्व राजालाई थाइल्याण्डमा भेट गरेको चर्चा छ । सुरक्षा निकाय स्रोतका अनुसार, वामदेवले महर्जनसँग २ पटक भेट गरेका छन् । पछिल्लो भेट करीब २ घण्टाको भएको थियो । उता, कोइरालाले थाइल्याण्डमा
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसंगै डिनर खाएको चर्चा छ । सुरक्षा स्रोतले दावी गरे अनुसार, उनीहरुबीच हिन्दू धर्मको पुनस्थापनाकै मुद्दामा छलफल भएको छ । अर्को रोचक संयोग नै मान्नुपर्छ, हिमानी ट्रष्टलाई जापानको राजसंस्थाले आर्थिक सहायता गरिहेको छ । त्यसमाथि भारत र चीन पनि पछिल्लो दिनमा हिन्दू धर्मको सन्दर्भमा सकारात्मक देखिदैछन् । त्यसको करामत पनि हुन सक्छ नेताहरुसंगको सम्बन्ध विस्तारको घटना ।
सरकारको प्रवक्तामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
वामदेवलाई फेरि धोका, राष्ट्रियसभामा उनको साटो युवराज खतिवडाको नाम
नेम्बाङ भन्छन्- ‘संविधान संशोधनको छलफल हो भने आउँदिन’
यौन हिंशाको आरोपमा मन्त्रीका सल्लाहकार पक्राउ
२०७६ फागुन १४ बुधवार
अब ३ लाख ८० हजारमै चढ्नुस कार
कुलमान सहित सञ्चालक समितिका पूर्व पदाधिकारीलाई ९ अर्ब घोटलामा कारवाही गर्न लेखा समितिको सिफारिस
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपाको निर्णय
२०७६ फागुन ११ आइतवार
काभ्रेको पिल्लर गोकुल बाँस्कोटा बिरुद्द लागेका ३ समूह,
२०७६ फागुन १३ मंगलवार
किन ट्रम्पले मोदीको कोटभित्र हात हाले